UNomzamo Mbatha uzovela ku-Coming 2 America | Scrolla Izindaba
UNomzamo Mbatha uzovela ku-Coming 2 America
Kuyiphupho lawo wonke umlingisi ukuya eMelika ingasaphathwa ke eyokulingisa emdlalweni yase-Hollywood ehamba phambili.
UNomzamo Mbatha, owayedlala indawo kaThandeka Zungu emdlalweni othandwa kakhulu kuleli kumabonakude Isibaya, useqedile ukuphupha. Usephila iphupho lakhe.
Lesi sihlabani esineminyaka engama-30 saseThekwini KwaMashu sidlala indawo kaMirembe ku-Coming 2 America.
Kungukuqhubeka komdlalo omkhulu wamahlaya i-Coming to America, eyayidlalwa u-Eddie Murphy njengenkosana yase-Afrika ehambela e-New York ukuyofuna unkosikazi azomhlonipha ngobuhlakani bakhe kanye nentando yakhe eqinile.
I-Coming 2 America iphinde ifake u-Eddie Murphy njengoPrince Akeem kanye nabanye babalingisi bakudala abanjengoWesley Snipes kanye nomlingisi osemnkantshubomvu uJames Earl Jones.
Kodwa kulokhu kukhona abalingisi base-Afrika abathe xaxa, kubandakanya uMichael Blackson wase-Ghana kanye noNomzamo odlala indawo kaMirembe ohlala endlini yobukhosi futhi ongumnakekeli wasebukhosini.
UNomzamo owalingisa emidlalweni eminingi edumile yamabhayisokobho aseNingizimu Afrika kanye nemidlalo yethelevishini utshele i-BBC ukuthi, lo kungumdlalo wakhe wokuqala wamabhayisikobho, umqondisi amenza wazizwa amukelekile ngokuqinisekisa ukuthi wonke umuntu ulibiza kahle igama lakhe. Ukuba sendaweni eyodwa nabalingisi asebemnkantshubomvu kulomkhakha bekungathi iphupho.
“Bengingahlali ngisho egumbini lami,” kusho uNomzamo.
“Bengizitshela ukuthi, ngize lapha ukuzofunda. La sifundiswa ngomakadebona base-Hollywood.”
Umthombo wesithombe: @NomzamoMbatha